IOS 8.1 amanqaku aza kufika ngoMvulo olandelayo kwi-iPhone yethu nakwi-iPad | IPhone iindaba
IOS 8.1 amanqaku aza kufika ngoMvulo olandelayo kwi-iPhone kunye ne-iPad yethu
UCarmen rodriguez | | IPhone iindaba, Apple Pay, iOS 8
NgoLwesine sibe nethuba lokubona umboniso we-iPads ezintsha kunye ne-iMac enomtsalane ngenkxaso yeRetina 5K, umboniso uhambe njengoko bekulindelwe kodwa ngeli xesha sabona ukuba Ukunyaniseka kwiingxaki ezihlupheke yi-iOS 8 Kwaye basixelele indlela abasebenza nzima ngayo ukuphelisa iingxaki ngokukhawuleza.
Uhlaziyo ekudala lulindelwe kwi-8.1 lukhona kwi-beta kwaye sigqabaze ngophuculo olwenzileyo ngokubhekisele kwinto eyandulelayo, lo mvulo uzakufumaneka wonke umntu ngendlela simahla kwaye ndifuna ukwenza isishwankathelo esincinci semisebenzi esiza kuyifumana kuyo.
Ngaphandle kwemfuneko ukulungiswa kwempazamo ezona zinto zinomdla ziya kuba:
1 Indawo ekhawulezileyo
1.1 Neemfuno zeeNkqubo
1.2 Iimfuno zomqhubi
3 ILloud Photo Library
4 Apple Pay
5 Ukuqengqeleka kweefoto
Ungasebenzisa Ukwabelana ngeIntanethi kwi-iPhone yakho ukubonelela ukufikelela kwi-Intanethi kwezinye izixhobo zakho. Kuya kufuneka ungene kwi iCloud usebenzisa i-ID efanayo ye-Apple njenge-iPhone yakho. Nawe umnxibelelanisi wefowuni kuya kufuneka inike eli nqaku.
Ukufikelela i-Intanethi kwifowuni yakho, yiya ku Useto > WiFi kwesinye isixhobo sakho se-iOS kunye khetha ifowuni yakho.
Ukunxibelelana nokwabelana nge-Intanethi, isixhobo sakho sifuna:
I-Wi-Fi: Inkxaso ye-802.11g / n usebenzisa i-WPA2 encryption.
I-USB: IMac okanye iPC ene-iTunes 9.2 okanye kamva efakiweyo.
Ibluetooth: Mac OS X v10.4.11 okanye iiWindows.
Qiniseka ukuba ifayile yakho ye- umnxibelelanisi wefowuni unikezela Ukwabelana nge-Intanethi ngesixhobo sakho kwaye unokwabelana nge-Intanethi kwisicwangciso sakho sefowuni:
i-iPhone: Uphando Uluhlu lwabasebenzi iyahambelana noKwabelana ngeIntanethi kwi-iPhone.
iPad kunye iPad mini: Nxibelelana nomsebenzisi ukuze ujonge ukufumaneka.
Ukuba unayo i-OS X Yosemite kunye ne-iPhone ene-iOS 8, unako thumela kwaye ufumane i-SMS ngqo kwi-Mac. Kwaye ukuba yonke imiyalezo efika kwi-iPhone iya kuvela kwi-Mac, ke incoko yakho iya kuba njalo kuhlaziywa kuzo zonke izixhobo zakho.
Unako kwakhona qala i-SMS okanye iMessage incoko ukusuka kwi-Mac ngokunqakraza nayiphi na inombolo yefowuni I-Safari, Abafowunelwa, iKhalenda okanye ukujonga.
ILloud Photo Library
Yimpendulo ka-Apple kwingxaki ye- gcina zonke iifoto zethu kunye nevidiyo ngonqabiseko olukhulu. ICloud Photo Library iya kuhamba njengohlobo lwe-beta yoluntu ukuqala ngoMvulo nge-iOS 8.1.
Umbono kukuba ICloud iya kugcina zonke iirekhodi kunye nemithombo yeendaba emanyelwayo esizisebenzisayo kunxibelelwano lwethu kwaye zihlala zifumaneka kuso nasiphi na isixhobo esifikeleleka ngeakhawunti ye-iCloud. Oko kubandakanya zombini izixhobo iOS, iiMac, kunye newebhusayithi yeICloud.
NgoMvulo ukumiliselwa kwentlawulo ngeApple Pay eMelika, inkqubo entsha kaApple leyo Idibanisa ubuchwepheshe be-NFC kunye ne-ID, ukwenzela ukuba izixhobo ezinazo zikwazi ukwenza intengiselwano, okoko nje umthengisi uxhasa olu hlobo lwentengiselwano.
Ndiyakukhumbuza ukuba ukufakwa kwale nkqubo yokuhlawula kuya kuba inkqubela phambili Ngenxa yesidingo sokuhlengahlengisa iinkqubo zomsebenzi weenkampani ezazifuna ukuba ngamalungu e-Apple kwaye zikhuthaze le nkqubo yokuhlawula ikhuselekileyo.
Emva kwezikhalazo zabasebenzisi, baya kuyibuyisela Ukuqengqeleka kweefoto iqondwe njengoko sinayo kude kube olu hlaziyo kwi-iOS 8.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Pay » IOS 8.1 amanqaku aza kufika ngoMvulo olandelayo kwi-iPhone kunye ne-iPad yethu
Izimvo ezi-24, shiya ezakho
UMarcus Aurelius sitsho
Kwaye umba wokudlulisa iifayile nge-AirDrop ukusuka kwi-iPhone ukuya kwi-Mac?
Phendula uMarco Aurelio
Izinto ezininzi ezingenamsebenzi sihamba
Ngaba iyayiphucula inani elikhulu leebugs?
Yongeza ukubeka 2g ukugcina ibhetri?
Iluncedo okanye ingcaciso
UCarmen rodriguez sitsho
Ukulungiswa kweempazamo, yinto esiyaziyo ukuza kuthi ga ngoku, ngokucacileyo akukho nto kule nto esele yazisiwe kwaye andicingi ukuba iyakwaziwa de isuswe inkqubo kwaye ivavanywe….
Phendula Carmen Rodriguez
UOtmar Mussle sitsho
Ukuphuculwa kobudenge okumsulwa, ukulungisa ngokungxamisekileyo ilahleko eqhubekayo ye-3g kunye nomqondiso we-wifi, yonke into ivaliwe, yoyikeka le IOS 8.0.2
Phendula u-Otmar Mussle
Kukho intetho edumileyo ethi ayisoze ine imvula ngokuthanda komntu wonke, asinazo iinkxalabo ezifanayo okanye iimfuno ezifanayo, nangona ezinye zinento yokwenza njengoko kunjalo kubomi bebhetri, kodwa ukuyibiza ngokuba kukuphucula ubuyatha akubonakali kufanelekile , ukuba ziphuculo, zamkelekile, sifuna abanye ???? ', kunjalo, umzekelo kubonakala ngathi kunamandla kakhulu ukuba utshintshiselwano nge-AirDrop aluhambi ukuba awunayo iMac ukusuka ngo-2012 okanye kamva, kum Ityala elinomoya ovela esiphelweni ngo-2010 alindilungelanga.
Ndicinga ukuba iCloud ngokubanzi ngumonakalo. Akucaci kwaphela ukuba isebenza njani. Kwelinye icala kukho iwebhu kwaye kwelinye izixhobo ze-iOS. Kuqala yayiziifoto ekusasazeni, ngoku ICloud Photo Library, emva koko bayayisusa ifilimu ... iya kuba iphinde ikhutshelwe kuyo yonke indawo ... andiqondi ukuba yinto ecacileyo. Kukho abantu abanee-imeyile ezimbini (ezabo kunye nezo zisuka kwi-iCloud enxulunyaniswa ne-ID ye-Apple ... Andizukuhlaziya ku-iOS 8 okanye kuYosemite kuba ndiyabona ukuba yonke into iba mbi ngakumbi. I-Apple ayisasebenzi ngokulula nangokuthe ngqo, ubuncinci koku.
Amagqabantshintshi akho ayinyani, isiphithiphithi esenza ukuba ungazi nokuba unazo phi iifoto. Nangona kunjalo ndincoma uYosemite, ndiyakuthanda ukucaca koyilo
I-AirDrop yeyona nto indikhuthazayo ukuba ndihlaziye, ndidlulise ividiyo ye-400 Mb kwimizuzwana eyi-10, isantya siyamangalisa (yayisele ingunyaka apho i-AirDrop yayiluncedo kwinto ethile)
Ndijoyina umbuzo, ekugqibeleni baya kusivumela ukuba sikhethe i-2G ??????? Abo kuthi bahlala kwiindawo ezinokhuselo oluncinci baya kuba luncedo kuthi.
Masibone. Ndinengxaki ukusukela ios8.0.2 kwaye andazi ukuba yenzekile kwimfuza engakumbi, khange ndishiye iakhawunti ye-iCloud nodadewethu, kwaye kuba sobabini sihlaziya kwi-iOS 8.0.2 ngalo lonke ixesha ndibiza enye yazo , ikwabize enye. Iphuma ngenani nangaphantsi "ukubiza kwenye i-iPhone." Ukuba bayambiza kwaye ndiyayithatha, sele ndiyithathile, emva kwemizuzwana embalwa iyasika, kodwa ndingakwazi ukuthetha nokuva yonke into. Ukuba ndiyithatha ngokuthe ngqo, yile nto bebeza kundibiza ngayo. Kuyafana nokuba bayandibiza kwaye uyayenza. Ndacinga ukuba yingxaki yeakhawunti okanye enye into, kodwa abazali bam babelana ngeakhawunti kwaye iyenzeka nakubo. Ayisiyo ngxaki enzulu kodwa iyacaphukisa. Nasiphi na isisombululo?
khubaza i-handoff kuseto-jikelele-ngesandla
Phendula kwi caca1A
Andizukuhlaziya i-iPhone 5 yam ndide ndibone iziphumo kwabanye kuba ngohlaziyo lwamva nje oluxhomekeke kwi-iPhone yam okanye ilala, icotha kakhulu ngelixa ios 7 ibisebenza kakuhle kwaye ndenze uhlaziyo lucocekile njengoko kucetyisiwe. Nangona olu hlaziyo lubonakala lungenamsebenzi kum ukuba ndiyathemba ukuba luzokulungisa iibugs zangoku.
Kum ifilimu ibonakala ngathi bubuyela umva ngoburhamncwa, ngexesha lefolda yesihloko ngasinye, mandichaze, kuba zonke iifoto zidityaniswe kwifilimu, i-whatsapp, ikhamera, ibluetooth, njl.
Ngaba ayinangqondo ngakumbi ukuba yonke into ibekho kwifolda yakho?
+1000, ndiyifumana esi sihloko sidandathekisa, kwaye inyani kukuba, ndinamaqela am e-whatsapp adlulisa iifoto, iividiyo, inkunzi yayo yonke into, kwaye ndine-reel yokuqhekeka, ndinemihla ngemihla ukucima nganye nganye, ethi i-android endinayo, zonke ziifolda, le yinto ekufuneka ixazululwe yi-apile…
Ukwabelana nge-Intanethi kunokwenzeka iminyaka emithathu ubuncinci ngoku, ndabelana yonke imihla ukusuka kwi-iPhone yam ukuya kwi-mac. Enye enye "into entsha" leyo ye-msm esele inokubakho ngaphambili. Inyani yile yokuba andazi ukuba ibuyisela ntoni kwakhona okanye kufuneka siphande ngakumbi
I-Ariel veli sitsho
Vumelana nawe. Andazi ukuba yintoni kanye kanye le intsha yokwabelana nge-intanethi, ndiyenzile nokuba bendine-3GS
Phendula u-Ariel Veli
Ukuphuculwa kukuba ngoku akufuneki uye kwifowuni kwaye wenze ukwabiwa kwe-Intanethi, ukhangele inethiwekhi, njl.
Ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba iintengiso ze-iPhones ezintsha ziya kuvela nini kwinethiwekhi zikamabonwakude zaseSpain? Enkosi
ULuis Reinoso sitsho
Molo ndifuna ukwazi ukuba uza kulungisa na kuba ukusukela ngoku ndihlaziya i-iPhone yam ikhiya itshixa xa kufunyanwa umnxeba kwaye ayisoloko isenzeka kwaye andazi ukuba ngubani ofowunayo kufuneka ndiyicime ifowuni ukuze isebenze kwakhona
Phendula uLuis Reinoso
Umama yintlungu, amehlo am aphume kwiziseko zam efunda uphononongo kubantu abangenalo kwaphela uluvo, abazi nokuba banyathela phi, ukuba bacinga ngokufanayo kuwo nawuphi na umxholo, lilishwa elingakanani eli yenze igañanismo.
Ndiyathemba ukuba ii-4s azicothi kangako
Ngaba uyakuyifaka i-rSAP (iProtokholi yoFikelelo kwiSIM) kude kube kanye? Kuyimfuneko ukwenza ukusetyenziswa kwedatha kwizikhangeli ezininzi ezakhelwe-ngaphakathi emotweni
NDIVUMELELE ngokupheleleyo kumagqabantshintshi athi i-REEL ngumsebenzi osemva… ilula njengokugcina ifoto nganye kwifolda ocinga ukuba ifanelekile, kutheni zonke iifoto zixubekile kule reel?… Imibuliso
ULuis ramirez sitsho
Ndingabelana njani nge-intanethi kwi-iPhone yam kunye nenye iselfowuni?
Ngaphambi kokuba kwenziwe useto> yabelana nge-intanethi, kwaye wabona apho iphasiwedi yeselfowuni yam, kodwa bayisusile
Phendula uLuis ramirez
Ndiza kuhlaziya ipad yam, egameni likaThixo
Phendula u Rocio
Uluhlu lwamatyala ahambelana nePad Air 2 entsha
IWork ye-iOS ihlaziyiwe ukulungiselela iYosemite